UKUPHATHA: UMartin Vrijland
Vula incwadi kuPeter R. de Vries kwimeko yeNicky Verstappen
Kufakwe kuyo NOKUPHATHA NICKY	by UMartin Vrijland	kwi-13 Disemba 2018	• 13 Comments
Othandekayo uPeter R. de Vries, enomdla omkhulu ndilandele ityala ngamacandelo uNicky Verstappen, apho uJos Brech ekholelwa ngokusemthethweni, elandelwa. Ngenxa yokucaca: andiyena umkhuseli kaJos Brech okanye nayiphi na into yokuxhaphazwa ngokwesini okanye umbulali. Nangona kunjalo, kubonakala kunzima ukuba le meko ingokwengqondo [...]
I-Jos Brech: "I-Psyop lawsuit" kuphela emva kwehlobo le2019
Kufakwe kuyo NOKUPHATHA NICKY	by UMartin Vrijland	kwi-12 Disemba 2018	• 10 Comments
Ukusuka kwii-tweets ezimnyama ze-Telegraaf intatheli uSaskia Belleman, kubonakala ngathi le ngxaki ye-Nicky Verstappen (yokuzikhusela) ayiyinto engaphezu kwintetho. Ezinye iifayile zilandele ukuba ziza kubonisa ntoni ukuba uJos Brech uvume ukuba unobunono boononografi kwi-PC yakhe, kodwa ukuba bathi banabanjwa yi-virus. UJos [...]
I-33 yamapolisa ifumana ifayile yaseYos Brech endala emva konyaka!
Kufakwe kuyo NOKUPHATHA NICKY, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	9 Novemba 2018	• 0 Comments
Kwakunokukhawuleza ukukhangela, ngokuqinisekileyo, kwaye kwakungekho msebenzi ongenakwenzeka, kodwa ngokukhawuleza kwakukho ifayile endala kaJos Brech, apho wayeya kwenza ukuxhaphazwa ngokwesini kunye namakhwenkwe angaphantsi. Lelo cala lahlehliswa ngokomqathango, kodwa oko akunandaba. U-Peter R. de Vries ubenabo bonke abathintana naye [...]
Kufakwe kuyo NOKUPHATHA NICKY, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-26 Septemba 2018	• 11 Comments
Ewe, lonke elaseNetherlands likhululekile ukuba ityala likaNicky Verstappen laholela ekubanjweni kukaJos Brech. Ngaphambili, i-DNA yabangela ukuthunjwa kukaJasper Steringa kwimeko yaseMarianne Vaatstra, ngoko ke i-DNA yiphumo. Kunalo naluphi na olukhokelela kwinkqubo entsha esemthethweni eyenziwa yiqhawe likazwelonke likaPeter R. de [...]
Kufakwe kuyo NOKUPHATHA NICKY, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-25 Septemba 2018	• 8 Comments
Uninzi lwamatyala okubulala ixesha elide eliye lafumana ingqwalasela enkulu kumaphephandaba ngoku ixazululwa ngegama lomlingo weDNA. Ewe, zixazululwa ngetyala ngamaphephandaba nguPeter R. de Vries kwaye emva koko zihambisa i-circus yeendaba kwi-inkundla ethatha isivakalisi esidlangalaleni, ngaphandle kokukhusela ngokusemthethweni. [...]
Indlela amajelo afaka ngayo ibali labo kuhlalutyo oluphambili kwaye baqhubeke bekhahlela ibali labo elihle (Jos Brech)
Kufakwe kuyo NOKUPHATHA NICKY, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-24 Septemba 2018	• 3 Comments
Ngothusayo ndandibona ukuphindaphinda kukaPauw, apho igqwetha likaJos Brech, uGerald Roethof, lilungise ibali lakhe kwinqaku endiyipapashile ngelinye ilanga ngaphambi kokusasazwa. Kwakubuhlungu kakhulu ukuba kukho ngokukhawuleza ezimbini iifom ezitsha ngokupheleleyo kwitafile. Iintonga ezintsha ezenza abantu baqiniseke malunga [...]
Olandelayo uhamba kwiNicky Verstappen - Jos Brech psyop? Iifoto zoonografi ezitholakalayo!
Kufakwe kuyo NOKUPHATHA NICKY, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-20 Septemba 2018	• 12 Comments
Ukuba wena, njengoMtshutshisi woLuntu, usebenza iminyaka ukulungiselela abantu ngamanyathelo amasha nge-PsyOp (ukusebenza kwengqondo), ngoko uya kuqinisekisa ukuba unedokodo elungileyo kwiindawo ezifanelekileyo ukuqhubeka ibali ekudakaleni. ukujikeleza. Oko kuthetha ukuba nawe udibene [...]
Ibali elijikeleze uJos Brech, umbulali kunye noxhaphaza uNicky Verstappen, uqhutywe kwiindawo eziphakamileyo. Izolo wathunyelwa eNetherlands eneenqwelo zangasese. Ingadla ezinye! Indiza ehleliweyo yayingenakwenzeka, kuba sikhuluma ngesichengisiso esitsha esasisongela i-mafia esiya kukhululwa ngabahlobo bayo befia naliphi na ixesha. [...]
I-DNA igama lomlingo elixazulula yonke into yokubulala nokuxhaphazwa ngokwesondo!
Kufakwe kuyo NOKUPHATHA NICKY, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	30 Agasti 2018	• 3 Comments
I-DNA yindlela entsha yemilingo yamapolisa kunye nobulungisa kwaye wonke umntu ugcwele udumo! Nge-DNA unokusombulula yonke into. Umzekelo, ukuba ummelwane wakho ufunyanwe efile kwaye kukho i-DNA kwimpahla yakhe, ngoko siyazi ngokukhawuleza ukuba ngubani umbulali! Oko ngokwenene uphumelelo kwezobuchwepheshe [...]
Kufakwe kuyo NOKUPHATHA NICKY, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	29 Agasti 2018	• 1 Comment
Uchungechunge lwe-Netflix 'Ukwenza uMbulali' lubonisa indlela abantu abanokubambelela ngayo kwizigqibo ezingalunganga iminyaka. Xa i-DNA kule ngqungquthela ihlala yinto ehlengahlengayo, i-DNA ingaba ngumgaqo omtsha owenza ukuba u-Murdererer asekelwe. Kusebenza kwengqondo (PsyOp) uqinisekisa [...]
Utyelelo lulonke: 2.565.663